DEG-DEG: Juventus Oo Heshay Jawaabta Dalab Ay Maanta Ka Gudbisay Xiddiga Talyaaniga Ee Manuel Locatelli - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Juventus Oo Heshay Jawaabta Dalab Ay Maanta Ka Gudbisay Xiddiga Talyaaniga Ee Manuel Locatelli
DEG-DEG: Juventus Oo Heshay Jawaabta Dalab Ay Maanta Ka Gudbisay Xiddiga Talyaaniga Ee Manuel Locatelli
Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa heshay jawaabta dalab ay maanta ka gudbisay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Talyaaniga ee Manuel Locatelli oo bandhig fiican ka sameeyey tartankii Euro 2020 ee uu waddankiisu ku guuleystay.
Manuel Locatelli ayaa ka mid ahaa xiddigihii sumcadda badan ku helay tartanka qaramada Yurub oo uu ka dhaliyey laba gool, taasina waxay keentay in lala xidhiidhiyo kooxo waaweyn oo Yurub ah oo qaarkood dalabkoodii ugu horreeyey gudbiyeen.
Arsenal ayaa hore loo sheegay inay si weyn u danaynayso laacibkan, lamana sheegin in ay dalab rasmi ah gudbisay, hase yeeshee kooxda Talyaaniga ah ee Juventus ayaa maanta waxay dalab €30 milyan oo Euro ah u gudbisay Sassuolo, taas oo iyaduna gaashaanka kusoo dhufatay.
Juventus ayaa u bandhigtay Sassuolo heshiis amaah laba sannadood ah iyo marka ay dhamaadaan oo ay kooxda reer Turin ku qasbanaado inay €30 milyan oo Euro kula wareegto laacibkan, laakiin Sassuolo ayaa jawaab diidmo degdeg ah kasoo bixisay.
Locatelli ayay kooxdiisu sheegtay, in kaliya ay aqbali karayso iib rasmi ah oo hadda ah iyo lacag gaadhaysa €40 milyan oo Euro.
Ciyaaryahankan ayaa kooxdiisa ku riixaya inay iibiyaan si uu uga ciyaaro tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe, waxaanay taasi ku keenaysaa inay dhegaystaan dalabyada lacagta wata.
23 jirkan ayaa sannadkii 2018 waxa uu kusoo biiray Sassuolo isagoo uga yimid AC Milan oo amaah kusoo dirtay kaddibna si rasmi ah ugu wareejisay sannad kaddib.
99 ciyaaarood oo uu u saftay Sassuolo waxa uu u dhaliyey toddoba gool, waxaana uu shaqo weyn ka qabtay khadka dhexe isagoo sannadkii 2019 looga yeedhay xulka qaranka Talyaaniga oo uu ugu dambayntiina usoo raacay Euro 2020 oo uu kulankii Switzerland.